Iwu dị mma, ebumnuche & ụkpụrụ - Shanghai Chigong Industrial Co., Ltd.
Ogo bụ akụkụ dị mkpa nke ozi anyị yana ụkpụrụ azụmaahịa dị mkpa. Ndị a na -eduzi omume anyị iji hụ na anyị na -ebunye ngwaahịa kacha mma iji mejuo ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Ụkpụrụ anyị dị mma mejupụtara ozi anyị, ụkpụrụ ya na ntinye onwe ya na nkwalite n'ihu.
Na -eme njikọ ọ bụla nke ike anyị ruru eru maka ijikwa ibu na ibu.
Mmekọrịta na -asọpụrụ ma jiri kpọrọ ihe
Anyị na-agbasi mbọ ike iwulite mmekọrịta a tụkwasịrị obi, nke na-adigide na ndị anyị, ndị ahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa n'ihi na ihe ndị a dị mkpa maka ọganiihu anyị ogologo oge.
Ịrụkọ ọrụ ọnụ
Anyị kwenyere na mmekorita ya na ndị otu siri ike maka ịnye nsonaazụ ziri ezi.
Ike na ịza ajụjụ
Anyị ga na -achụpụ ikike ịza ajụjụ site na ọkwa niile nke nzukọ ka anyị wee nweta ebumnuche azụmahịa anyị.
Nzuzu zuru oke na oke iguzosi ike n'ezi ihe
Anyị na -eme omume anyị mgbe niile.
Ọkacha mma na mmezu yana nkwalite na -aga n'ihu
Anyị ga -emecha nweta nsonaazụ ego anyị wee wuo ndị ahịa na -eguzosi ike n'ihe na mmezu dị elu n'akụkụ niile nke azụmahịa anyị.
Ntinye aka obodo
Dịka onye were mmadụ n'ọrụ na mpaghara, SCIC gbara mbọ inyeghachi obodo.
MGBE Ị GA -EMEZIE ỌGỤGỤ
SCIC kpebisiri ike ịbụ onye nrụpụta ihe nke ụwa a tụkwasịrị obi nke ọma na onye na -ebubata agbụ ígwè njikọ gburugburu site na itinye ego na ndị anyị na usoro iji wee nyefee nguzozi nke ịdị mma, ntụkwasị obi na ọnụ ahịa nke na -egbo mkpa ndị ahịa anyị.
Iji mezuo ebumnuche anyị nke ịbụ onye ndu ụlọ ọrụ ama ama, anyị na -agba mbọ ịkwalite ihe ndị a mgbe niile iji zute ebumnuche anyị:
Anyị na -elekwasị anya na atụmatụ atụmatụ iji hụ na edobere Sistemụ Njikwa Ogo nke ọma ma guzobe ebumnuche dị mma n'ime nzukọ maka usoro ndị ahụ na -emetụta ngwaahịa a na -emepụta. Ebumnuche ndị a bụ nha ma kwekọọ na ebumnuche anyị nke ịkwalite ogo ngwaahịa anyị.
Anyị na -etinye ego na mmepe ndị ọrụ anyị iji kwalite ma gbaa ndị ọrụ ume na itinye aka na nzukọ a niile. Nke a bụ ihe dị mkpa maka ijigide ụkpụrụ anyị dị elu.
Anyị na -agbasi mbọ ike imeziwanye usoro anyị site na ụkpụrụ nrụpụta dabere.
Anyị na -etinye ego na akpaaka igwe ebe enwere ike iji belata mgbanwe, ntụpọ na mkpofu.
Anyị na -elekwasị anya n'iwulite mmekọrịta siri ike na nke na -adigide na ndị na -ebubata ya iji hụ na ejiri ngwa kacha mma rụọ ngwaahịa anyị.
Anyị na-ahụ na echekwara akụrụngwa na akụrụngwa anyị nke ọma, nke na-enye ebe ọrụ nchekwa, enweghị ịkpa oke nke na-akwalite ma na-agba ume itinye aka na ntinye aka na nzukọ a niile.